केपी ओलीबाट ‘नगद’ त ल्याउनुपर्‍यो नि ! | Ratopati
जसपा उपेन्द्र र महन्थको एकलौटी होइन : मोहम्मद इस्तियाक राई
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यो पार्टी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको एकलौटी नभएको बताएका छन् । महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीसँग उधारो सहमति गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
‘केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनीबाट नगद पाइन्छ भनेर दुईजना नेताहरूले भन्दै हिँडेका छन् भने नगद त ल्याउनुपर्&zwj;यो नि’ नेता राईले रातोपाटीसँगको द भ्यु टक सो कार्यक्रममा भने, ‘उहाँहरूले पाँचवटा माग राख्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म पाँचवटा मागमध्ये एउटा पनि पूरा भएको छैन ।’
प्रस्तुत छ जसपा नेता राईसँग गरिएको भिडियो वार्ताको सम्पादित अंश –
अहिले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू केपी ओलीको सरकारको विकल्प खोजिरहनुभएको छ । तर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको फरक लाइन छ । यही कारण जसपाले बोल्ड डिसिजन दिन नसकेको हो ?
यो न उपेन्द्र यादवको, न महन्थ ठाकुरको एकलौटी पार्टी हो । पार्टीका सदस्य र पदाधिकारीहरू हुन्छन् र त्यसैको निर्णयअनुसार उहाँहरू अघि जाने हो । दिशा र दशा तय गर्ने हो ।
विगतको पार्टीको निर्णय हेर्ने हो भने ओली प्रतिगमनकारी हुन् । उनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतलगायत हामीले मञ्चमा गएर भनेका होइनौँ र ?
त्यो निर्णय अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीले उल्ट्याएको छ र ? ६ जनाले डबली बजाएर हुन्छ र ? कोहीले केपी ओली ठीक भन्छन्, कोहीले फलानो ठीक भनेर हुन्छ र ? हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूले केपी ओली प्रतिगमनकारी हुन् र केपी ओलीलाई पदच्युत गर्नुपर्छ । उनको निर्णयलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको विगतको निर्णय हो ।
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्न गए । तर अहिलेसम्म त केपी ओलीले त बहुमत गुमाइसकेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शेरबहादुर देउवाले म प्रधानमन्त्री बन्छु, निर्णय लिन्छु भन्ने हो भने सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खोइ त । दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन । त्यसपछि दुईवटा खेलाडी हुन्छन् ।
मैले विगतको निर्णय भनेँ । अहिलेको निर्णयको कुरा गर्ने हो भने त मैदानमा एकजना मात्रै खेलाडीका रूपमा केपी ओली छन् । हाम्रा माग पूरा ग¥यो भने सरकारमा सहभागी हुने भनेर पदाधिकारी बैठकले निर्णय ग¥यो, केन्द्रीय कार्यकारिणीमा त्यो अहिलेसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन ।
अब हामी मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनेर ५ जनाले निर्णय गरे । त्यसका निम्ति ५ जना शीर्ष नेतृत्वले वार्ता गर्ने, त्यसैक्रममा उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराई होस् वा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो केपी ओलीलाई भेट्न पनि गए ।
हाम्रो मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने जोसँग मुद्दा मिल्छ, त्योसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने पार्टीको लाइन हो ।
तर यो लाइन अनौपचारिक हो । यो ५ जनाले मात्रै निर्णय गरेका हुन् । विगतको लाइन के हो भने यो सरकारले संसद् विघटन संवैधानिक रूपले गरेको हो, यो सरकारलाई पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय आधिकारिक हो । यसमा स्पष्ट हुँदा हुन्छ ।
५० जना ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ, भोलि त्यसमा छलफल होला, अर्को निर्णय आउला । त्यतिबेलासम्मका लागि यही नै आधिकारिक निर्णय हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीमा म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने चाहना भित्रैदेखि देखिएन भन्ने तपाईंको कुरा हो ?
विलकुल हो । छ भने आउनुपर्&zwj;यो । हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन गरेर आउँछौँ भनेर भन्नुपर्‍यो, अविश्वास प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्नुपर्‍यो ।
त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौं ।
देशमा गणतन्त्रको जनक भनेको माओवादी हो । त्यही गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा माओवादी चुप लागेर बस्छ भने कति दुर्भाग्य हो । त्यही सङ्घीयता र समावेशितामा प्रहार हुँदा हाम्रो दल चुप लागेर बस्यो भने पनि दुर्भाग्य हो ।
भनेपछि शेरबहादुर देउवाजीले केपी ओलीप्रति नै कहीँ न कहीँ रुचि देखाइराख्नुभएको छ ?
त्यो विगतदेखि नै देखिइरहेको हो । अहिले पनि संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा पाउनुभएकै छ । आन्दोलनका बेला हामी एकधारमा थियौँ । काँग्रेसमा दुई धार थियो– एउटा प्रतिगमनकारी हो, यसलाई पदच्युत गर्नुपर्छ र निर्णय रद्द हुनुपर्छ भन्ने धार र देउवाजीको अर्को धार, जसको निर्णय अदालतले जे भन्छ, त्यो मान्छौँ भन्ने नै थियो ।
जेहोस्, आधा–आधामा विभाजित भयो नि । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको ठेकेदार हौँ भनेर काँग्रेसले आफूलाई ठान्ने तर त्यही लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा प्रतिरक्षाका लागि एक ढिक्का भएर नउभिने, यो त दुग्र्भाग्य हो नि देशका लागि ।
देशमा तीनवटा परिवर्तन भएको हो, तीनवटा जनक मान्नुपर्छ । त्यसमा सबैको सहयोग छ । त्यस्तो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा मेरो विमति होला । तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मुद्दा उठाएर उपलब्धितर्फ लैजाने काँग्रेस हो ।
सङ्घीयता ल्याउने, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउने हामी मधेसी दल हौँ ।
देशमा गणतन्त्रको जनक भनेको माओवादी हो । त्यही गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा माओवादी चुप लागेर बस्छ भने कति दुर्भाग्य हो । त्यही सङ्घीयता र समावेशितामा प्रहार हुँदा हाम्रो दल चुप लागेर बस्यो भने पनि दुर्भाग्य हो । त्यस्तै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुनु, सबै संरचना कब्जा गर्नु, जे मनलाग्यो त्यही गर्नु, संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि चुप लाग्नु वा विभाजित भएर काँग्रेसको भर्सन आउनु भनेको देश र उनको पार्टीका लागि दुर्भाग्य हो ।
मानिलिऊँ तपाईंहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नै टेबुल गर्नुभयो । तर अहिलेको अवस्थामा जसपालाई पनि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसप्रति विश्वास नभएको अथवा ती दलहरूलाई एकअर्काप्रति विश्वास नभएको, भोलि जतिबेला अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्छ, तब त्यो पारित नभएर केपी ओली पदमा रहनुभयो भने त उहाँको अवधि अझै लामो समयसम्म अघि बढ्छ । त्यो कुराले कहीँ न कहीँ भूमिका खेलेको छ ?
राजनीतिमा विश्वास केका लागि ? दुईवटा फरक परिवेश, फरक परिवार र जात भएकाहरू हामी विवाह गर्छौं र बन्धनमा रहन्छौँ । यद्यपि, त्यो टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि ? तर सम्बन्ध त विश्वासमै रहन्छ ।
काँग्रेससँग स्थानीय तहको चुनावमा साझेदारी हुँदाहुँदै हिजो माओवादी केन्द्रले आम चुनावमा त अर्कै गठबन्धन त गरेकै हो नि ?
त्यही मैले भने । जीवनभरीका लागि ग्यारेन्टी गरेर सातफेरा लिन्छौँ, हामी निकाह पढ्छौँ । तर त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने, दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ भने त सम्बन्ध विच्छेद किन भइरहेको छ ?
यो त राजनीतिक दल हो नि, फरक एजेन्डा, फरक विचार, फरक घोषणापत्र र फरक चुनाव चिन्हसहित अगाडि आएका हुन् । तर तत्कालीन मुद्दा के हो, त्यसमा विचार गरेर विश्वास गरेर अघि बढ्नैपर्ने हो ।
श्रीमान्–श्रीमती त सधैँ सँगै हुन्छौँ भन्ने विश्वास हुँदैन । अनि राजनीतिक दलको सम्बन्ध त क्षणिक मात्र हो नि । एउटै दल बन्यो र फुट्यो पनि त ।
अनि दुईवटा दल मिलेर जाँदा अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था मैदानमा एउटै खेलाडी केपी ओली मात्रै छन् । रेफ्री पनि उही र दर्शक पनि आफै छन् । तर कोही उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराईको लाइनमा छन् भने त्यो पार्टीको लाइन हो ।
तपाईंलाई यति टिप्पणी गर्दा उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराईको मान्छे भन्छन् भन्ने आपत्ति हो ?
होइन, म किन उहाँको मान्छे । म त उपेन्द्र यादवकै विरुद्धमा पार्टी विभाजनसम्मको आरोप खेपेको मान्छे । हामीले त्यो गर्दा नै राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा निर्माण भएको हो ।
तपाई आफैले शृङ्खला कोट्याउनुभयो । त्यहीबेला भएको चाहिँ के थियो ? प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक विभाजनसम्बन्धी एउटा अर्को अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । तपाईं मन्त्रिपरिषद्मै हुनुहुन्थ्यो । तपाईंलाई जे मन्त्रालय मिलेको थियो, त्योभन्दा थप शक्तिशाली मन्त्रालय दिने कुरा पनि चर्चामा आएकै हो ?
मानिसहरूले उपेन्द्र यादवले राजीनामा दियो, इस्तियाक राईले राजीनामा दिँदैन भनेर पनि हल्ला चलाए । पार्टीमा बसेसम्म म पार्टी लाइनबाट बाहिर जाने कुरै हुँदैन । पार्टीमा बस्दाखेरी मैले पार्टीको निर्णय स्विकार्ने हो तर मेरो विचार, मेरो फरक दृष्टिकोणलाई कसैको निर्णयले रोक्न त सक्दैन । बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार्न सक्छु तर आफ्नो विचारलाई मारेर बस्न त सक्दिनँ होला । हाम्रो मतभिन्नता थियो र अहिले पनि हुनसक्छ । म उपेन्द्र यादव र बाबुरामको मान्छे होइन, म पार्टीको मान्छे हुँ ।
अहिलेको वर्तमान परिवेशमा के उपयुक्त छ त्यसैमा जानुपर्छ ।
केपी ओलीले त्यो बेला यो देशको एकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीबाट गलत भयो भन्ने दुई बुँदे सहमतिसहित हामीलाई बोलाए, हामी गयौँ । व्यक्ति त व्यक्ति हो नि । आज निरङ्कुश हुन्छ, फेरि प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ ।
भन्नाले त्यतिबेला राजीनामा नगर्नु ठीक थियो ?
राजीनामा मैले गरेँ । त्यो ठीक थियो । पार्टीले राजीनामा गर्ने निर्णय ग¥यो किनकि केपी ओलीले हामीसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेनन् । २ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि गरेनन् । त्यतिबेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्मा हाम्रो नेतृत्व गरिराख्नुभएको थियो । उहाँले संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा एउटा विज्ञ समूह गठन गरौँ भन्ने प्रस्ताव लग्दासमेत त्यसलाई बेवास्ता गर्नु र हुनै सक्दैन भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएकाले पार्टीको निष्कर्ष केपी ओली सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने भयो । त्यो हामी सबैले स्विकार्&zwj;यौँ । उपेन्द्र यादवजीभन्दा पहिले मैले राजीनामा गरेको हो नि, बजारमा उपेन्द्रजीको हल्ला पहिले पुग्यो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मेरो राजीनामा पहिले दर्ता भएको हो ।
व्यक्तिको दिमाग बिग्रियो भनेर के गर्ने, सांसद् कहिलेसम्म कायम राख्ने, प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म कायम रहने भनेर हामीले विकल्प पनि राख्छौँ नि । किनकि यस्तो हुनसक्छ । व्यक्ति त सुध्रन पनि सक्छ । त्योबेला किन बस्नुभयो मन्त्रिपरिषद्मा ? अहिले किन ठीक छैन भन्ने होइन । केपी ओली भोलि फेरि ठीक हुनसक्छन्, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत दुस्मनी होइन । औषधि खायो भने त मान्छे निको पनि हुन्छ नि ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीका लागि औषधि के त ?
उहाँले कम्तीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ । जुन व्यक्ति, हाम्रो देशको सर्वोच्च व्यक्तिलाई अदालतले असंवैधानिक निर्णय ग¥यो भन्यो, त्यो निर्णयलाई उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ ।
अदालतले भन्यो नि, केपी ओलीको निर्णय असंवैधानिक हो । बदर मात्रै गरेको होइन नि । देशको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक निर्णय गर्दा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
कुनै व्यक्तिसँग हामी जाने–नजाने आफ्नो ठाउँको कुरा हो । परिस्थिति त निर्माण भयो भने भोलि ओलीले मुद्दा सम्बोधन गरे, आत्मआलोचना गरे, सबै माग पूरा गरे भने सहकार्य हुनसक्छ । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । ओली हाम्रा लागि दुस्मन त होइनन् नि ?
केपी ओलीले हिजो पनि हामीलाई गोली हानेका हुन् । माखे साङ्लोलगायत शब्दहरू प्रयोग गरेकै हुन् तर त्यसपछि पनि हामी उनको सरकारमा पनि गएकै हौँ । उहाँले दुई बुँदै सहमति गर्नुभयो– विगतमा हामीबाट त्रुटि भयो भनेर । त्यो आत्मआलोचना नै हो नि । एउटा पक्षको माग यसमा छैन, त्यसकारण संविधान संशोधन हुनैपर्छ भन्नुभयो हामी गयौँ ।
तर पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा जाने वा अरू कोहीको नेतृत्व आउला र गइएला तर गलतलाई हामी गलत भन्छौँ । बहुमतले ममाथि निर्णय गरेर मलाई कुनै काम गर्न बाध्य गर्नसक्छ तर मेरो विचारलाई कहिले पनि मार्न सक्दैन ।
अहिलेकै अवस्थामा तपाईंहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्ने आधार छ कि छैन ?
अहिलेसम्म त कुनै आधार निर्माण भएको छैन ।
तर हुनसक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
तपाईंले नै भन्नुभयो नि, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नसक्छौँ भन्नुभएको छ । तर त्यसको पनि आधार त हुनुप¥यो नि । उहाँहरूले पाँचवटा माग राख्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो पाँचवटा मागमध्ये एउटा पनि पूरा भएको छैन । केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनीबाट नगद पाइन्छ भनेर दुईजना नेताहरूले भन्दै हिँडेका छन् भने नगद त ल्याउनुपर्&zwj;यो नि ।
भनेपछि उधारोमा सहमति खोज्नुभएन ?
भर्खरै तपाईंले भन्नुभयो नि, खेलाडी, गोलकिपर, दर्शक तपाईं आफै । अब बैङ्क तपाईंको, म्यानेजर, सीईओ तपाईं भने त गरिदिए हुन्छ । अर्कोले त रेफ्री पनि बन्छु, खेलाडी पनि बन्छु, दर्शक पनि बन्छु र त्यसपछि सहमति गर्छु भन्दैछ । उहाँ (ओली) त अहिले सबै हो नि, अनि उहाँका अनुयायीले त त्यस्तो निर्णय गरेर हामीलाई दिए हुन्छ । त्यसपछि पार्टीले विचार गर्ने हो ।